Marka 6: 1-56
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?" "
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?(suite et fin)" "
Marka 5 Marka 6 Marka 7
Ary rehefa tonga ny Sabata, dia nampianatra tao amin'ny synagoga Izy; ary maro izay nihaino Azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe: Taiza no nahazoan'Ilehity izany zavatra izany, ary manao ahoana ny fahendrena nomena Azy sy izao asa lehibe ataon'ny tànany izao.
Tsy ilay mpandrafitra, zanak'i Maria, ary rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va Ilehity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy izy.
Fa hoy Jesosy taminy: Tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany.
Ary nandrara azy Izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny halehany, na hanina, na kitapo, na vola, ao amin'ny fehin-kibony, afa-tsy tehina ihany.
Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo, na tsy hihaino anareo, raha miala hianareo, dia ahintsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy.
Fa hoy ny sasany: Elia Izy; ary hoy ny sasany: Mpaminany Izy, dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany.
Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra an'i Jaona ka namatotra azy tao an-trano-maizina noho ny amin'i Herodiasy, vadin'i Filipo rahalahiny; fa nanambady azy izy.
Fa Jaona efa nilaza tamin'i Heroda hoe: Diso hianao, raha manambady ny vadin'ny rahalahinao.
Fa Heroda natahotra an'i Jaona, satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy; ary rehefa nandre azy izy, dia very hevitra be ihany;ary nihaino azy tamin'ny hafaliana izy.
Ary rehefa tonga izay andro antonona, dia ilay nanaovan'i Heroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehy arivo ary ny loholona tany Galilia tamin'ny andro fahatsiarovana nynahaterahany,
Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina, ka nasainy nentiny ny lohan'i Jaona. Ary dia nandeha izy, ka notapahiny tao an-trano-maizina ny lohany.
Ary hoy Jesosy taminy: Avia hianareo hitokana any an-tany foana, ka mialà sasatra kelikely (fa maro no nifamoivoy, ka tsy nisy hihinanana aza).
Ary ny olona nahita azy mandeha, sady betsaka no nahalala an'i Jesosy, dia niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka nihazakazaka nandeha an-tanety,dia tonga talohany.
Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nisaotra, dia novakiny ny mofo ka natolony ny mpianatra mba harosony eny anoloan'ny olona ary ny hazandrano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra.
Ary niaraka tamin'izay Jeososy dia nanery ny mpianany hiondrana an-tsambokely hita hialoha ho any Betsaida, mandra-pandràvany ny vahoaka.
Ary nahita azy ireo sahirana nivoy fatratra Izy, fa notohain'ny rivotra; ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangantsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy.
Ary rehefa hitany nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Izy, dia nataony ho matoatoa, ka niantso mafy izy ireo.
ka nihazakazaka tamin'izany tany rehetra izany ary nitondra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany.
Ary na taiza na taiza no nidiran'i Jesosy, na tao amin'ny vohitra, na tao an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona nangataka hanendry na dia ny somotraviavin-dambany ihany aza; ary sitranaizay rehetra nanendry Azy.